प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क रहस्यमय संसार
करेला एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । करेलामा भिटामिन ए, भिटामिन बि १, भिटामिन बी २, भिटामिन सि, फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम, जिङक, फलाम, कपर तथा फोस्फोरस हुन्छ । स्वास्थ्यमा यसले गर्ने फाइदा निम्न छन ।
मुम्बई - सामान्यतया मानिसको मुखमा ३२ वटा दाँत हुन्छ। तर भारतमा एक १७ वर्षीय आशिक गवाई युवकको मुखबाट चिकित्सकहरूले दुई सय बतिसवटा दाँत निकालेका छन्।
जन्मिँदै बुढी महिला जस्तै स्वरुपकी बालिका भारतको महाराष्ट्रस्थित पालघर जिल्लाको दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी एक बालिकाले आफ्नी आमाको दूध चुस्न त परै जाओस् छोरीको मान्यता पाउन पनि सकिरहेकी छैनिन् । ती बालिकालाई उनकी आमाले अपनाउनु त टाढाको कुरा दूध समेत चुसाउन मानेकी छैनिन् । आखिर किन ? ती बच्चीले आमाको दुध चुस्न नपाउनुको कारण उनी जन्मिँदै बुढी महिला जस्तै स्वरुपकी हुनु हो । निकै अनौठो: दुइवटा यौनांग भएकी महिला यु-ट्युब स्टारको चर्चा
क्यासेन्ड्रा ब्यांकसन यु-ट्युब स्टार हुन् । उनी यु ट्युबमा स्टार बन्नुको कारण भने निकै अनौठो छ, त्यो हो उनका दुइवटा यौनांग छन् । दुइवटा गुप्तांग भएको कारणले गर्दा उनको जिवनमा निकै धेरै उतार चढाव आए । भैँसीको मालिक पत्ता लगाउन डिएनए परीक्षण गरिने
अघिल्लो हप्ता गाउँबाट एउटा भैँसी बेपत्ता भयो । प्रहरीले हराएको भनिएको उक्त भैँसी फेला त पार्यो तर फेला परेको भैँसीको मालिक मैँ हुँ भनेर दुइजना मानिसहरुले दाबी गरेपछि प्रहरीलाई भैँसी जिम्मा लगाउन सकस पर्यो । प्रहरीले भैँसीको खास मालिक पत्ता लगाएर भेटिएको भैँसी मालिकलाई जिम्मा लगाउने अनेकौँ जुक्ति लगायो, तर सफल हुन सकेन । तर अब भने भैँसीको खास मालिक पत्ता लगाउँछ नयाँ उपाय अपनाइएको छ । असली मालिक पत्ता लगाउन उक्त भैँसी तथा उसका पाडापाडीको डिएनए टेष्ट गरिने भएको छ ।
९ बर्ष बालिकाको उमेर ९२ किलो तौल
भारतको पश्चिम बंगालकाकि एक बालिकाको भोकको कुरा सुन्दा पत्याउन गार्हो पर्छ तर यो सत्य कुरा हो । सुमन खातून नाम गरेकी ९ बर्षीय उक्त बालिका संसारमा खानकै लागि मात्र जन्मेकी हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ ।
बिचित्र संसार : एकैपटकमा १७ वटा बच्चाहरु जन्मिए
एजेन्सी - अमेरिकाकी एक महिलाले एकै पटकमा १७ बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । उनले २९ घन्टाको अवधिमा त्यतिका संख्यामा बच्चालाई जन्म दिएर रेकर्ड नै कायम गरिकी छन् ।
विश्वकै होँचा चन्द्रले विश्वकै अग्ला सुल्तान भेट्ने
विश्वकै होंचा ब्यक्तिकोरुपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा सूचीकृत नेपालका चन्द्र बहादुर डांगी र विश्वकै सबैभन्दा अग्ला ब्यक्तिकोरुपमा सूचिकृत टर्कीका सुल्तान कोसेनबीच भेट हुने भएको छ ।
भान्सामा सधै हुनुपर्ने १० खानेकुरा, जसले घटाउँछ तौल... हाम्रो किचेनमा सधै हुनु पर्ने १० खानेकुरा जसले मोटोपना घटाउन पनि मद्दत गर्दछ र हाम्रो शरिरलाई चाहिने सम्पुर्ण पौष्टिक तत्व पनि प्रदान गर्दछ ।
के तपाइँलाइ थाहा छ ? कुन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ! जान्नुहोस ...... पूर्वीय दर्शनले ज्योतिषशास्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । अझैपनि लाखौं मान्छे ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउछन् । मान्छेको जीवनमा ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिले उ जन्मेको महिनाले पनि धेरै फरक पार्छ । कुन महिनामा जन्मेका महिलाहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ् यो पढ्नुहोस्–
सेक्सपछि पुरुषलाई किन निद्रा लाग्छ ?
के सेक्सपछि निद्रा लाग्नु अस्वभाविक हो ? होइन । यो सेक्सको दौरान हाम्रो शरीरले गरेको मिहिनेतको नतिजा मात्र हो । यो विशेष गरेर पुरुषहरुमा देखिने गर्छ । तर, पुरुषमा देखिने यो बानीले कतिपय महिलाहरुलाई भने निरास बनाइरहेको हुन्छ । निम्न कारणले पुरुषहरु सेक्सपछि सुत्ने गर्छन्ः
१. रात्री समयमा गरिने सेक्सको बेला मानिस पहिलेनै थाकिसकेको हुन्छ । त्यसमा पनि सेक्समा मानिसले गर्नुपर्ने शारीरिक क्रियाकलापले उसलाई अझ बढी थकित बनाइदिन्छ । त्यसैले मानिसहरुको राती सेक्सपछि निदाइहाल्ने गर्छन् । अझ सेक्सले शरीरलाई रिल्याक्स गर्ने भएकोले गर्दा पनि मानिसहरु सेक्स पछि निदाउ...
३ सय ४७ किलो तौल भएकी महिला विवाहको तयारीमा
अमेरिकाको आयोवा राज्यमा बस्ने ३ सय ४७ किलो तौल भएकी च्यारिटी पियर्स प्रेमीसँग विवाहका लागी शरीर घटाउने प्रयासमा छिन् ।
एक पुरुषका जस्का श्रीमती मात्र ३९:सन्तान १२७ जना एजेन्सी - भारतको मिजोरममा एक यस्ता पुरुष छन् जस्का श्रीमती मात्र ३९ जना छन् । सन्तान त उनका १२७ जना छन् । भोक मेट्न चकलेट होइन:मेकअप खाने युवती
चकलेट खाने आदत हुनु त स्वभाविकै हो । तर, ओहायोकी ब्रिटनाको आदत भने फरक छ । उनी चकलेट होइन, मेकअप खान्छिन् । २२ वर्षकी ब्रिटना दिनमा १५र२० पटक मेकअप खान्छिन् ।
संसारकै सबभन्दा ठूलो हिप भएकी महिला
संसारकै सबभन्दा ठूलो हिप भएकी यिनको नाम मिकेल रफिनेली हो । उनी आफ्नो मोटो हिपप्रति निकै खुसी रहेको बताउँछिन् । नाङ्गै गाडी चलाउनेलाई समात्न हेलिकोप्टरको दौडादौड
बेलायतमा नाङ्गै गाडी चलाएको आरोपमा एक भ्यान ड्राइभर पक्राउ परेका छन् । हर्टफोर्डशयरको यो घटना रोचक त्यसबेला भयो, जब नाङ्गो ड्राइभरलाई पक्राउ गर्न हेलिकोप्टर नै परिचालन गर्नुपर्‍यो ।
कुकुरको छाउरोलाई आफ्नै दूध चुसाएर अनौठो रेकर्ड बनाइन महिलाले अमेरिकामा एउटी महिलाले कुकुरको छाउरोलाई स्तनपान गराएर अनौठो रेकर्ड बनाएकी छिन् । भर्खरै जन्मिएको छाउरोलाई ‘जीवन रक्षा’ को लागि उनले आफ्नै स्तनपान गराएकी हुन् । धूलो वा पाउचको दूध खुवाउन उनको आत्माले नदिएको फेसबुक पेजमा लेखेकी छिन् ।
फेसबुक चलाउने युवतीलाई कुटीकुटी मारियो
१८ फेब्रुअरी २०१४
एजेन्सी । तपाईँ फेसबुक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? अथवा तपाईँले फेसबुक चलाएकै कारण कसैको गाली खानुभएको त छैन होला नि । कसैले तपाईले फेसबुकमा बद्मासी गरे तपाईँलाई गाली गर्नु त स्वाभाविकै हो तर सिरियामा भने फेसबुक चलाएको बहानामा एक युवतीको विभत्स हत्या गरिएको छ ।
२० लाख माहुरी मारेको अभियोगमा ४ महिना जेल सजायँ
पोल्याण्डको अदालतले माहुरी मारेको अभियोगमा त्यहाँकी एक महिलालाई ४ महिनाको जेल सजायँ सुनाएको छ । जोन एस ड्यु नामकी ती महिलामाथि २० लाख माहुरीको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो ।
भारतको संसदमा बैठक चलिरहँदा ‘सन्की सभाषद्’ले खुर्सानीको धुलो छर्किए
१३ फेब्रुअरी २०१४
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित लोकसभामा बैठक चलिरहँदा एक सन्की सांसदले खुर्सानीको धुलो छर्केपछि संसदमा सांसदबीच भागदौड मच्चिएको छ ।
अचम्मको संसार : पुरुष र कुकुरबिच प्रेमबिबाह अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को राज्यले एक पुरुषलाई कुकुरसँग बिबाह गर्न अनुमति दिएको छ । सान फ्रान्सिस्को राज्यले पहिलोपटक मान्छेलाई जनावरसँग बिबाह गर्ने अनुमति दिएपछि सोमबार त्यहाँका एक ३५ बषिर्य पुरुषले आफ्नो कुकुरसँग बिबाह गरेका छन् ।
तपाईं कुन बेला जन्मनु भो हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य-स्वभाव ज्योतिषशास्त्रमा मानिस वा कुनै घटनाको सम्बन्धमा फलादेश गर्दा विभिन्न कुराहरूलाई आधार मानेर गर्ने गरिन्छ । यसमध्ये यहाँ एक दिनको समय अर्थात् २४ घण्टाभित्र जन्म भएको मानिसहरूको फलादेश गर्दा समय विभाजनको आधारमा मानिसको स्वभाव, भाग्य, पेसा, व्यवसाय, आयु र पारिवारिक अवस्था आदिको सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिन्छ ।
यसमा सूर्यको स्थान र अवस्थालाई आधार मानेर फलादेश गरिन्छ ।
अचम्मको ब्रा, जुन सच्चा प्रेमीका अगाडीमात्रै खुल्छ !
जो कोहिलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ ,ब्रा सच्चा प्रेम गर्ने पुरुषको अगाडि मात्र खुल्छ भन्ने सुन्दा । तर यो वास्तविकता हो । जापानको एक कम्पनीले एस्तो हाईटेक ब्रा बनाएको छ, जुन सच्चा प्रेम गर्ने पुरुषको अगाडि मात्र खुल्छ । झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तै देखिने यो ब्राले पुरुषको भ्रम तोड्दै उक्त ब्रा लगाउने महिलाले प्रेम गर्छिन कि गर्दिनन् भन्ने जानकारी दिनेछ । यो ब्रा बुद्धिमान र चलाख छ कि, महिलाको अगाडि रहेको पुरुषले बास्तवमै प्रेम गर्छ भने मात्र खुल्छ ।
रासड्रोफ (जर्मनी) – गाईले पाद्‍दा निस्केको मिथेन ग्यासले जर्मनीमा एक गाईगोठ विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ।प्रहरीलाई उदृत गर्दै वीवीसीले जनाएअनुसार रासड्रोफमा गाईको पादले विस्फोट हुँदा गोठको छानो ध्वस्त भएको छ भने एक गाई घाइते भएको छ ।